Tsy any Mantasoa na nohazonina manokana… : miandry ny fitsarana azy eny Antanimora i Claudine | NewsMada
Tsy any Mantasoa na nohazonina manokana… : miandry ny fitsarana azy eny Antanimora i Claudine
Nandiso ireo vaovao niely momba an-dRazaimamonjy Claudine ny eo anivon’ny mpiandrry fonja. Nanamafy izany koa ary nitondra fanazavana ny eo anivon’ny Sendikan’ny mpitsara (SMM).
« Miandry ny fotoam-pitsarana azy aty amin’ny fonjan’Antanimora Razaimamonjy Claudine. Efa nahazo ny fitsaboana izy matoa nalefa aty. Misy mpitsabo manara-maso ny fahasalaman’ny voafonja aty », hoy ny lehiben’ny fonja, ny komandà Rakotonandriana Olivier, omaly. Nitondra fanazavana manoloana ny feo niely fa efa tsy eny amin’io toerana tokony hitazonana azy vonjimaika azy io intsony indray ity tandapa ity fa any Mantasoa na Manjakandriana… Nanamafy izany ny SMM, tamin’ny alalan’ny filoha lefitra, Fanahimanana Tiaray. « Ny gadra politika ihany no mahazo toerana manokana arahi-maso fa tsy olon-tsotra voarohirohy amin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana. Tsy fanarahan-dalàna indray koa raha miditra amin’izany », hoy izy, tetsy Anosy, omaly.
Olona 10 mpiray tendro amin’i Claudine
Nohitsiny fa tsy tokony homena tombony manokana io mpandraharaha io sady tsy raharaham-panjakana rahateo na resaka politika ny momba azy. « Efa nilaza ny fitondrana fa tsy raharaham-panjakana ka tsy tokony hisy fametrahana azy amin’ny toerana voatokana arahi-maso izany. Tsy tokony hisy fikarakarana manokana koa », hoy ihany ny SMM.
Etsy andaniny, niantso ny Bianco koa izy ireo mba hiroso lalindalina satria tsy nahavita samirery ny mety ho fanodinkodinam-bolam-panjakana izany Razaimamonjy Claudine. « Misy mpiasan’ny minisiteran’ny Atitany sy ny Tahirim-bolam-panjakana koa ao anatin’io. Tsy latsaky 10 ireo tompon’andraikitra mpiray tendro aminy », hoy izy.
Tsy mahazo fahafahana vonjimaika (LP)
Ankoatra izany, mbola misy raharaha efatra hafa miandry azy eo anivon’ny Bianco, ankoatra ireo raharaha roa niampangana azy sy nidirany am-ponja. « Mbola misy fanadihadiana hatao aminy momba izany ka aorian’izany vao tokony ho afaka mangataka fahafahana vonjimaika (LP) ny voarohirohy », filoha lefitry ny SMM, Jaona Clement. Nanterin’izy ireo fa efa famaliana ny ampahany amin’ny fitakian’izy ireo izao nandefasana am-ponja vonjimaika (MD) ity mpandraharaha ity izao. « Tsy ampy hamahana ny disadisa eo amin’ny SMM sy ny fitondrana anefa izany. Mbola andrasana ny fepetra tokony horaisin’ny governementa momba ny loholona Andriamandavy Riana », hoy izy. Tsy hanaiky tsindry samihafa amin’ny hanohizana ny fanadihadiana sy ny hitadiavana ny marina ny eo anivon’ny SMM, araka ny fanazavana ihany.